Umgangatho ophezulu woMenzi weeNtshi zoMatshini kunye noMthengisi | Yanzhao
I-Metric Lock Nuts zonke zinento edala isenzo esingatshiyo "sokutshixa". Ukoyisa iTorque yokuTshixa amantongomane kuxhomekeke ekuguqulweni kwemisonto kwaye kufuneka ucocwe kwaye ucime; ayingomachiza kunye nobushushu obulinganiselweyo njengeNylon Faka iitshixo zokutshixa kodwa ukuphinda usebenzise kwakhona kusikelwe umda.
I-Metric Lock Nuts zonke zinento edala isenzo esingatshiyo "sokutshixa". Ukoyisa iTorque yokuTshixa amantongomane kuxhomekeke ekuguqulweni kwemisonto kwaye kufuneka ucocwe kwaye ucime; ayingomachiza kunye nobushushu obulinganiselweyo njengeNylon Faka iitshixo zokutshixa kodwa ukuphinda usebenzise kwakhona kusikelwe umda. Amantongomane e-K-Lock atsala simahla kwaye anokuphinda asebenze. Ukusetyenziswa kwakhona kweNylon Insert Lock Nuts kunqunyelwe kwaye ukufakwa kwenayiloni ekuthinjweni kunokuba semngciphekweni wokonakaliswa ziikhemikhali ezithile kunye nobushushu obugqithisileyo; Ukutsala i-nut kunye nokucima nayo iyafuneka. I-Zinc yentsimbi yamantongomane yentsimbi ukuya kuthi ga kwiKlasi ye-10 kunye nentsimbi engenasici enomsonto ojijekileyo kunye nomatshini ococekileyo onokuhanjiswa. Ezi zitshixo zetriki zine-nylon efakwe kwiibholithi ngaphandle kokonakalisa imisonto yazo. Banemisonto ye-pitch-pitch, esondeleleneyo kunemisonto erhabaxa-yenowuthi kwaye kunqabile ukuba ikhululeke kukungcangcazela. Imisonto entle kunye nemisonto erhabaxa ayihambelani. Ezi zitshixo ziphinde zisebenze kodwa ziphulukane nokubamba amandla ngokusetyenziswa ngakunye.
Ukutshixa amantongomane kunokusetyenziswa kwizicelo ezininzi ezahlukeneyo ezibandakanya ukukhawulezisa iinkuni, intsimbi, kunye nezinye izinto zokwakha zeeprojekthi ezinjengeedokodo, iibhlorho, izakhiwo zohola wendlela, kunye nezakhiwo.
Izikere zentsimbi emnyama ezimnyama zithomile ukumelana nokuthamba kwiindawo ezomileyo. Izikere zentsimbi ezifakwe intsimbi zinciphisa umhlwa kwiindawo ezimanzi. Izikulufu zentsimbi ezimnyama ezinganyangekiyo umhlwa kunye neeklinikhi kwaye zimelana neeyure ezili-1 000 zetyuwa yokutshiza ityiwa. khetha la manqatha eHex ukuba awuyazi imisonto nge-intshi. Imisonto entle kunye neyongezelelweyo-ethe-ethe yahlulwa ngokusondeleyo ukunqanda ukukhululeka kukungcangcazela; ukucoca umsonto, kokukhona ukuxhathisa.
Iitshixo zokutshixa ziyilelwe ukulungelelanisa iirathchet okanye iworche torque zewrench ezivumela ukuba uqinise amandongomane kwinkcazo yakho ngqo. Iibholiti zeBakala 2 zihlala zisetyenziselwa ukwakha ukudibanisa izinto ezenziwe ngomthi. Iibholiti zebakala 4.8 zisetyenziswa kwiinjini ezincinci. IBakala 8.8 10.9 okanye i-12.9 iibholithi zibonelela ngamandla aphezulu. Olunye uncedo lwamanqwanqwa okubopha ane-welds okanye ii-rivets kukuba avumela ukulungiswa okungalunganga kokulungiswa kunye nokugcinwa.
Ubungakanani bomtya M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
P Phakamisa 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4
da Ubukhulu 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 21.6 25.9 32.4 38.9
h Ubukhulu 7.2 8.5 10.2 12.8 16.1 18.3 20.7 25.1 29.5 35.6 42.6
s Ubukhulu 8 10 13 16 18 21 24 30 36 46 55
ubunzima()≈ikg 1.54 2.94 6.1 11.64 17.92 27.37 40.96 73.17 125.5 256.6 441
Egqithileyo I-Hex Nuts
Okulandelayo: Esisangqa Amandongomane
Iitshixo zentsimbi yeCarbon
I-Din 981 Locknuts
Amandla aphakamileyo eLocknuts
I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts, Iibholiti, I-Hexagon Socket Head Bolts, Amandla aphakamileyo eHex Bolts, Din6921 esisangqa Amandongomane,